စာလုံးပေါင်းတော့ မှန်စေချင် - Random of NangNyi
Home Unlabelled စာလုံးပေါင်းတော့ မှန်စေချင်
by NangNyi 11:41 AM
ခုဆိုရင် စာလုံးပေါင်းမှားတာတွေက နေရာတကာမှာ ဖြစ်နေပြီ.. ကြည့်ရအဆိုးဆုံးကတော့ အများပြည်သူမြင်သာတဲ့နေရာမှာ ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ စာလုံးပေါင်းမှားတာ.. ပြီးတော့ မြဝတီနဲ့ မြန်မာ့အသံ စတဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာ စာလုံးပေါင်းမှားတာ.. တခါတလေ အစိုးရထုတ်သတင်းစာတွေမှာတောင် စာလုံးပေါင်းအမှားတွေမြင်နေရပြီ.. ခုနောက်ပိုင်း အများဆုံးမှားတာကတော့ "မှု" ကို "မှု့"လို့ ရေးတာ.. ဟထိုးနဲ့ တချောင်းငင် ပါပြီးသား စာလုံးမှာ အောက်ကမြင့် ထပ်ထည့်စရာမှ မလိုဘဲ.. ဒါပေမယ့် ခုနေရာတကာမှာ မှု အမှားတွေမြင်နေရပြီ.. အမြင်ကပ်ပြီး စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ..
ဘလော့ဂါတွေဟာ စာရေးဆရာတွေ မဟုတ်ဘူး လို့ပြောကြပေမယ့် ဘလော့ဂါတွေဟာ စာရေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ.. ပြီးတော့ စာလည်းဖတ်ကြတဲ့ လူတွေ.. ဒီဘက်ခေတ်မှာ အွန်လိုင်းစာပေတွေ ပေါ်လာတော့ ပုံမှန်စာအုပ်တွေကို ဖတ်အားကျသွားကြပြီ.. နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ လူတွေဆိုပိုဆိုးမယ်.. အွန်လိုင်းကစာတွေ ဘလော့တွေ ဖိုရမ်တွေ ဒါတွေနဲ့ပဲ ကျေနပ်နေရမှာ.. အဲ့ဒိမှာ စာလုံးပေါင်း အမှားပြဿနာက အရမ်းကိုကြီးကျယ်သွားပြီထင်တယ်.. ဟိုဘလော့ဖတ်လည်း သတ်ပုံမှား.. ဒီဘလော့ဖတ်လည်း သတ်ပုံမှားနဲ့ဆိုရင် ဖတ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်လည်း သတ်ပုံတွေ အမှတ်မှားလာတော့မယ်.. ထင်သလိုပေါင်းတော့ ရေးတော့မယ်.. အဲ့ဒါတွေကို နောက်ထပ်ဖတ်တဲ့လူက တခါမှား.. နောက်ထပ်လူတွေ မှား မှား.. ခု ၄ နှစ် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးတွေ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ "သတ်ဗုံဒွေကို တရောက်တမြိုးဆီ ပေါင်းနေကြရင် ခက်ပီ"..
ခေတ်ပညာတွေတတ်ပြီး နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာနေတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာစကားကိုတောင် ကိုယ် မှန်အောင်မပေါင်းနိုင်တဲ့အခါ ရှက်ဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်.. တချို့ကပြောသေးတယ် "သတ်ပုံအမှန်သိပါတယ်.. လောကြီးပြီးစာရိုက်တဲ့အခါ typing error ပါ" တဲ့.. အိုခေ.. တိုက်ပင်းအယ်ရာဆိုလည်း တစ်လုံးတလေက ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါသေးတယ်.. ပြီးတော့ ချက်တင်မှာ မှားတာက သိပ်အရေးမကြီးပေမယ့် ဘလော့တွေ ဖိုရမ်တွေလို အေးအေးဆေးဆေးစာရိုက်လုိ့ရတဲ့နေရာမှာတော့ သေချာပြင်ဆင်ပြီးမှ ရေးသင့်တယ်မထင်ဘူးလား.. (ဒါတောင် ချက်တင်မှာ ရိုက်တဲ့ စာလုံးပေါင်းတွေက တကယ်တမ်းစာတွေရေးတဲ့အခါ အကျင့်လာလာပါနေတတ်သေးတယ်).. နန်းညီဆိုရင်လည်း များသောအားဖြင့် ချက်တင်မှာစကားပြောတဲ့အခါ "ပြီ" ကို ရိုက်လို့ စိတ်မရှည်ဘူးဆိုပြီး "ပီ" လို့ပဲ ရိုက်ရိုက်နေတာ.. နောက်တော့ စာတွေတကယ်ရေးရင်တောင် ရရစ်ထည့်တဲ့ အကျင့်မရှိတော့ စာလုံပေါင်းတွေမှားတယ်.. အဲ့ဒါ အခုဆို ချက်တင်မှာလည်း သေချာစာလုံးပေါင်းပြီး ရေးနေရတယ်..
ပြီးတော့ စာလုံးပေါင်းအမှန်သိရဲ့သားနဲ့ ပြီးလွယ်စီးလွယ်ရိုက်တတ်တဲ့လူတွေ.. ဥပမာ..ရရစ်ဆိုပါစို့.. သူက အမျိုးအစားတွေ အများကြီးမဟုတ်လား.. ပ တို့ မ တို့နဲ့ တွဲရတဲ့ ရရစ်က J တစ်လုံးထဲရိုက်ရတဲ့ "ြ " ဒါမျိုး.. က တို့ တ တို့မှာသုံးတာက shift+m "ြ - " ရိုက်ရမယ့်နေရာ.. မ တွေ ပ တွေကိုပဲ လုံးကြီးတင်ထည့်ချင်ရင် shift+n "ြ " .. က တွေ တ တွေအတွက် လုံးကြီးတင်ထည့်မယ့် ရရစ်က shift+b "ြ " .. အဲလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့ ရေးထုံးရေးနည်းတွေကို တိုက်ပင်ရိုက်ရတာ စိတ်မရှည်တဲ့အခါ ဘာလာလာြ J တစ်လုံးပဲနှိပ်ပြီးသုံးတဲ့လူလည်းရှိရဲ့..( မြ.. ကြ.. တြ.. ပြ.. ) ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းဘူးလေ..
ပြီးတော့ အောက်ကမြင့် ဆိုရင်လည်း.. (ညံ့.. တဲ့.. မဲ့) တွေအတွက်က ရိုးရိုး h တစ်လုံးထဲရိုက်ရတာ.. (မှဲ့.. မန့်.. ခန့်) လိုဟာမျိုးတွေက shift+Y ကိုသုံးတာ.. (ချို့.. ရို့..) ဆိုတာမျိုးတွေကျတော့ shift+u ကိုသုံးတာ.. တချို့က အောက်ကမြင့်ကို အဲလိုတွေရှာရစိတ်မရှည်ဘူးဆိုပြီး အောက်ဆုံးတန်းနားက (.) ဒီအစက်ကိုသုံးပြန်တော့လည်း သူတို့ရေးတဲ့စာတွေက ဒီလိုဖြစ်နေပြန်ရော (သူအဲလိုပြောလိုက်တော. သူမက ခပ်မဲ.မဲ. ပြုံးလေသတဲ.) ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ရော.. ဘယ်လိုလုပ်ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေပါတော့မလဲ..
မြန်မာစာမှာ စာကို အစုလိုက် အစုလိုက် အဖြတ်အတောက်မှန်မှ စာဖတ်ရတာ ချောပါတယ်.. အဲ့လို စာစုလိုက် စာစုလိုက် ဖြတ်တတ်ဖို့က ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျင့်လာရမှာ.. ကျောင်းက ဖတ်စာအုပ်တွေကိုကြည့်လေ.. စာအဖြတ်အတောက်လေးတွေ ဘယ်လိုဖြတ်ပေးထားလဲ.. ကိုယ်က စာရေးတဲ့အခါမှာလည်း အဲလိုပဲ စာကို အစုလိုက်ကလေးတွေ ခြားခြားပြီးရေးတတ်အောင် ကျင့်ထားသင့်တာ.. တချို့က စာရေးရင် ၃ လုံးခြားတစ်ခါ space ခြားတယ်.. ဥပမာ (စာကို အစုလိုက် အပိုဒ်လိုက် စနစ်ကျစွာ ရေးပါ) ဆိုတဲ့ စာကြောင်းပဲ ထားပါတော့.. သူက ဒီလိုရေးတယ် (စာကိုအ စုလိုက်အ ပိုဒ်လိုက်စ နစ်ကျစွာ ရေးပါ).. ဘယ်လိုမှကို အဆင်မပြေဘူး.. သူများတွေ စာရေးရင် ခြားထားတာတွေ့လို့ သူလည်း လိုက်ပြီး space သုံးတာပဲရှိတယ်.. ဘာကြောင့် ခြားတယ်ဆိုတာကို သူနားမလည်ဘူး.. အဲဒီလိုလူမျိုးက ရှားတော့ရှားပါတယ်..
နောက်ပြီး တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင် typing လုပ်တဲ့အခါ လိုက်နာရတဲ့စည်းကမ်းတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်.. (နန်းညီက ၄ တန်းကတည်းက အမေ့စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းမှာ ကူပေးခဲ့တော့ စာရိုက်နည်းကို အတော်စနစ်ကျခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်).. ဥပမာ.. စာတစ်ကြောင်းပြီးရင် ပုဒ်မချရတယ်.. ပုဒ်မ ချတဲ့အခါ နောက်ဆုံးစာလုံးနဲ့ ကပ်ချရတယ်.. နောက်ဝါကျ တစ်ကြောင်းစမယ်ဆိုရင် ပုဒ်မနောက်မှာ space ခြားပြီးမှ စရိုက်ရတယ်.. ဘာကြောင့် အဲလိုလုပ်တာလဲ.. print ထုတ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ်လည်း စာတွေတန်းစီရိုက်တဲ့အခါ ဝါကျနောက်ဆုံးစာလုံးနဲ့ ပုဒ်မ ကပ်နေမှ spacing မဆန့်လို့ ကွန်ပျူတာက အောက်တစ်ကြောင်းဆင်းပေးရင် ပုဒ်မက ကပ်ပါလာမယ်.. နောက်တစ်ကြောင်းနဲ့ ရှေ့ပုဒ်မ space ခြားထားမှ အောက်တကြောင်းဆင်းသွားတဲ့အခါ စာကြောင်းသပ်သပ်လေးတွေ ဆင်းမယ်..
ခု နန်းညီကတော့ ပုဒ်မ မချဘဲ အစက်အစက်တွေသုံးပြီး စာကိုဆုံးတယ်.. တကယ်ဆို အဲဒီလိုလည်း မလုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်.. ဒါပေမယ့် ထားပါဦးလေ..
ပြောချင်တာက.. တမင် အသံထွက်အတိုင်း လိုချင်လို့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစံနှုန်းကို ချော်ထွက်ပြီးသုံးတာကလွဲရင် သတ်ပုံတွေကို ဂရုတစိုက် မှန်အောင်ရေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ.. စာစီစာရိုက်စည်းကမ်းတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် လိုက်နာပေးလိုက်ရတာက ဘာမှ နစ်နာမှုမဖြစ်သွားဘူးထင်ပါတယ်.. ဖတ်ရတဲ့လူ အဆင်ချောပြီး မျက်စိထဲလည်း လှတာပေါ့.. စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းဆိုတာ လူတိုင်းကြည့်ဖူးသင့်တဲ့ စာအုပ်ပါ.. စာလုံးပေါင်း မသေချာတဲ့အခါ စာအုပ်ပြေးလှန်လိုက်ရတာ ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီး ထင်သလိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ စာကိုဖတ်ရတဲ့ နောက်လူတွေအတွက် မကောင်းပါဘူး.. စာလုံးပေါင်းကို မှားနေမှန်းလည်းသိပြီး မှန်အောင်လည်းကြိုးစားမှတ်ထားသင့်ပါတယ်..
ခုဆို [http://myanmarwords.pikay.org/] လိုမျိုး စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း ဝဘ်ဆိုက်တွေလည်းရှိနေတာပဲ.. facebook မှာလည်း စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအမှန်ပြင်ပေးရေးအဖွဲ့လား ဘာလား.. ရှိတယ်.. နန်းညီဆိုရင်လည်း မြင်သလောက် တွေ့သလောက် သတ်ပုံမှားတွေ စာရိုက်တဲ့စနစ်အမှားတွေကို ကိုယ်သိသလောက် ပြင်ပေးပြောပေးပါတယ်.. မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်အောင်လုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆလို့ပါ..
စာလုံးပေါင်းတော့ မှန်စေချင် Reviewed by NangNyi on 11:41 AM Rating: 5
Rita August 05, 2011 12:33 PM
Rita August 05, 2011 12:34 PM
စကားမစပ် တခါတလေ မှားမှန်းသိလည်း အလွယ်ရိုက်ပစ်တတ်တယ်။
N..N August 05, 2011 1:23 PM
Chit Ritor....U r very right :)
တီချမ်း August 05, 2011 1:47 PM
သူ့ကျတော့ ဒေါ.ဒေါ.နဲ. ရေးတာကို ထားလိုက်ပါတော့လေ တဲ.
ဘာ ပဲဖြစ် ဖြစ် သည် ပိုစ်.လေးကတော့ ကောင်းပါဒယ် ။ဟိ
Anonymous August 06, 2011 1:47 AM
Not only spelling but also sentence constructions were wrong in Myanmar news paper and worst than that the article is about Nation's Order by the President. The meaning was totally wrong because ofamisplacement of clause between subject and object. You can see it in recent news about One minister's resigning.
ShwunMi- August 06, 2011 8:24 AM
I keep smiling, and in the end, I see this- ရေးချင်ရာသာရေးကြပေတော့
ချစ်ကြည်အေး August 06, 2011 1:01 PM
ဒီပိုစ့်ဖတ်နေတုန်း တချိန်လုံး မတွေ့ဖူးတဲ့ မမကွန်မျက်နှာကြီးပဲ ပြေးပြေးမြင်နေ၏။ :))ခက်တယ် !!!
သက်ဝေ August 07, 2011 9:09 AM
ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ဖူးတယ်... ခု ပြန်ဖတ်တော့လည်း ကြိုက်တယ်...
စကားမစပ်... ဒေါ်ချစ်ကြည်တယောက်က နိုင်ငံရေးတွေ သိပ်ပြောတာပဲ... :D
နန်းညီ August 08, 2011 10:07 AM
နည ရေးတာ အန်တီကွန် လို့ တစ်လုံးမှ ပါဝူးနော်.. ဟိဟိ
မေဓာဝီ August 08, 2011 12:51 PM
ဒီပို့စ်လေး သဘောကျတယ် နန်းညီရေ။
စာတပုဒ်မှာ စာလုံးပေါင်းတွေ မှားနေရင်၊ အဖြတ်အတောက် ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်မ မှားနေရင် စိတ်ထဲ တော်တော် ဘ၀င်မကျ ဖြစ်ရတယ်။
အရင်ကတော့ တွေ့ရင် လိုက်ပြောဖြစ်ပေမဲ့ လူအမြင်ကပ်ကြလွန်းတော့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တာ ကျင့်သားရသွားပြီ။ :)
cherry August 08, 2011 4:56 PM
Thank you for your post. Cause of now i know how to use shift+y and shift+u.
Mandy August 08, 2011 8:49 PM
သတ်ပုံနဲ့ စာရိုက်ပုံရိုက်နည်း တတ်နိုင်သလောက် အမြင်သိပ်ကြီးမဆိုးရွားအောင်တော့ ဂရုစိုက်ပါတယ်။ အားလုံးထောင့်စေ့တော့ မှန်ချင်မှန်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကသတ်နဲ့ တသတ်ကို အသံထွက်မတူပဲ မှားရိုက်နေကြတဲ့သူတွေ သိပ်များလို့ အဲဒါတခုတော့ မျက်စေ့ထဲ သိပ်ကန့်လန့်ဖြစ်တယ်။
စာဖတ် ကို စာဖက်
ကျောင်းတက် ကို ကျောင်းတတ် ဆိုပြီး ရေးနေကြတာမျိုးလေ။
pm August 09, 2011 6:15 PM
i think unicode font will improve spelling... since u need to spell it correctly
e.g myanmar = မ+ြ- +န+ -် မ+ာ instead ofြ- + မ + န+ _် မ+ာ
မယ်ကိုး August 13, 2011 4:46 PM
ဖတ်ပြီးသား ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ထုချေလွှာပေးပြီးသား စာလေးကို တစ်ခေါက်ပြန်လာဖတ်ပါတယ် ..း)
ဒါပေမဲ့ ဆိုတာကို ဒါပေမယ့်လို့ နှစ်သက်စွာ ယနေ့ထက်တိုင် အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်ရေးနေဆဲ အစ်မကို ထပ်မံပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးပါဦးလို့ :P
Min March 27, 2012 1:15 PM
ရရစ် နဲ့ အောက်ကမြစ် အကြောင်း မှတ်သွားပါတယ်။